कुनै नयाँ काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ ? यी ७ नियम कहिल्यै नबिर्सनु ! – Nep Stok
पुष २८, २०७८ बुधबार 290
यी ७ नियम कहिल्यै नबिर्सनु !
केही विद्धानहरुका अनुसार हामी कुनै नयाँ काम सुरु गर्नुअघि दुविधामा फस्ने भएकाले आफ्नो कामको बारेमा केही विशेष शुत्र थाहा पाउनु पर्ने बताउछन् । किनभने हामी कुनै काम सुरु गर्न आटेको बेलामा कामको भविष्यको बारेमा सोच्दछौ । जस्तै सफलता हुन्छ या हुदैन् ।
तर चाणक्यका अनुसार कुनै नयाँ काम सुरु गर्नुअघि यी ७ कुरामा ध्यान दिएमा कुनै दुविधामा नफस्ने बताएका छन् । किनभने चाणक्य प्राचीन भारतवर्षका बुद्धिमान, चतुर र प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुन् । हेरौ के के हुन् ?पहिलो कुरा यी ३ सोच बनाएर मात्र काम सुरु गर्नुपर्छ । काम शुरु गर्ने समय र स्थान, २. तपाईंको सम्पत्ति ३. समर्थन गर्ने मानिसहरूदोस्रोमा आफ्नो क्षमताको लेखाजोखा गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्छ । यदि आफुले सुरु गरेको काम गर्ने क्षमता आफुसँग छैन् भने नसोचेको असफलता हात पर्छ ।
तेस्रोमा आफ्नो बोली कस्तो छ । त्यसमा पनि भर पर्छ । किनभने यदि तपाई मिठो बोल्नुहुन्छ भने जे काम गरेपनि फाइदा हुन्छ चौथोमा दुश्मनलाई साथी बनाउने क्षमता हुनुपर्छ । त्यसैले तपाईलाई सफल हुनबाट कसैले रोक्दैन् पाचौमा तपाई आफु शारिरिक रुपमा स्वास्थ्य हुनुपर्छ । -छैटौमा काम शुरु गर्नुअघि विद्वान् तथा ज्योतिषीसँग सल्लाह लिनु पर्दछ । किनभने कुनै पनि काममा आफु १०० % जान्ने भन्ने हुदैन् ।
सातौमा कुनै नयाँ काम सुरु गर्नु अगाडि पत्नीसँग सल्लाह गर्नुहोला । बाकीँ अरु कसैलाई नसुनाउनुहोला र आठौमा काम सुरु गर्दा आफु नराम्रो पनि बन्नुपर्छ । किनभने ठुलो निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी सबै मानिसको सोचाइ विचार अनुसार आफ्नो घरको मुल डोका महत्व पूर्ण मानिन्छ । मानिसका मनमा दुई किसिमका विचारहरुले वास गरिरहेका हुन्छन् । ति हुन् सकरात्मक विचार र नकरात्मक विचार यी मधये सकरात्मक विचारको आत्मा साथ गदै अघि बढन सक्यो भने मानसिक तथा आर्थीक पक्ष समेत राम्रो भएर जान्छ ।
यो सकरात्मक विचारले मानिसको घरमा समेत शान्तिको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । विभिन्न ज्योतिष शस्त्रको भनाई अनुसार मानिसको नकरात्मक विचारलाई उसको मनबाट जहिले अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसै दिन देखि उस्को घरमा शान्तिको वास हुन्छ । पूजाकोठामा भगवान गणेशजी को मूर्ति राख्दा हुने ५शुभ लक्षणहरु :
घर परिवालाई सुख समृद्धि राख्नका लागि रातो रङ्ग भएको भगवान गणेश जी को मूर्तिको पूजा गदा आफ्नो मनोकक्षा पूरा हूने विश्वास छ ।घरको मूल डोका अगाडि भगवमन गणेशको फोटो राखी पूजा गर्दा सिङकेधुप पनि बाल्नुहोस यसको सुगन्धले तपाईको मानमा शान्ति मिल्ने छ ।भगवान गणेशको पूजाका साथै संगितमय वतावरण्मा उनको आरति समेत गनुहोस सुख समृद्धिको आवास हुने छ ।
घरको वरिपरि सधै सफा राख्नुहो यसले सकरात्मक सोचको विकास गर्नमा सहयोग पू¥याउछ घरको वरिपरि तोरण टाग्नुहोस यसले शान्तिको आवाश हुने छ ।यस्ता कुराहरु एक चोटि विचार गनुहोस सकरात्मक विचारको सोच तपाईको हातमा छ । सथै भगवान गणेश तपाईको साथमा छन् ।
Nextदलित परिवारका दाजुबहिनीले एकैपटक निकाले एमबीबीएस छात्रवृत्तिमा नाम